Republic of Belarus (Belarus) - isimo yesimanje European elinabantu cishe ayisishiyagalolunye futhi abantu abangaphezu kwesigidi nengxenye (njengoba zakuqala 2016). Ngokusho endaweni indawo yezwe labo ke ithatha 84 endaweni th emhlabeni (207,600 km 2) futhi ihlukaniswe yaba izifunda eziyisithupha. Inhloko-dolobha yezwe, emzini Minsk, ngokomthetho kuyinto esifundeni lwesikhombisa has a isimo ekhethekile komuzi, elise kwakuwukuthi republic. Ukuma uhulumeni Belarus - republic kamongameli. Alexander Lukashenko, uMongameli eyisibopho WeRiphabhulikhi YaseNingizimu Afrika, ophethe okuthunyelwe zekhanda zombuso iminyaka engaphezu kwengu-20 (kusukela ngo-July 20, 1994).
Belarus yilona zwe elikhulu kunawo European, awunakho ukufinyelela abo olwandle. Empumalanga ke elisemngceleni ne Republic of Russian Federation, futhi ukuya ngasentshonalanga ne Poland. On the indawo eseningizimu imingcele isimo nge-Ukraine, enyakatho - ne aseBaltic: livulekele izivakashi kokubili Lithuanian futhi Latvian imingcele. Belarus Ubuye eziningi umngcele Ukunqamula amaphuzu, abasebenza ngaphansi kohlelo lula (ezakhamuzini izindawo umngcele).
Ngo Belarus kunezindlela eziningana okhokhelwayo. Esinye salezi, M1, kuyingxenye umzila European E30, esukela edolobheni Irish Kakhokho kuwo umuzi Russian of Omsk. Iphinde sidlula-UK, Netherlands, eJalimane, ePoland nase-yonkana Schengen imingcele "Belarus-Poland" kakusekho insimu ka-European Union. Chief phakathi kwabo - kuba ngamazwe umngcele owela iphuzu "Warsaw ibhuloho" (Brest-Terespol), kanye ngokusebenzisa oludlula umzila E30.
isimo International ziwumthwalo izici ezithile ku mode nokusebenza. It livulekele ubusuku nemini (njenge yokuwela kakhulu umngcele), kodwa ukudlula akuvunyelwe nganoma yisiphi umngcele nempahla kanye nezimoto trailer, ezingaphezu kwesisodwa isondo bhangqa (-eksisi). Lokhu kuyiqiniso nangezingane zonke Villas trailer nezinqola. Ngaphezu kwalokho, kuleli qophelo ukwazi okuseqophelweni eliphezulu kakhulu ku entry. Izimoto ekusakazeni uthunyelwa ebhokisini elikhethekile ukuhlolwa okugcwele ezihilela izinja amaphoyisa aqeqeshiwe ukuthola imithi.
Nokho, kunezinye yokuwela umngcele "Belarus-Poland". Zonke izimoto bezentengiselwano emkhawulweni p / n "Kozlovichi", esenyakatho yendawo nje Brest. Isigaba reception, izimoto ezithwala, kubandakanya noma iyiphi i-trailer, hhayi ukunganakwa. Bonke labo abafisa ukuba nesikhathi benikwa ithuba ukwehlela 40 km eningizimu Brest uhambe phesheya ngokusebenzisa p / n "Domachevo-Sławatycze". Lapha lidlule iyiphi womgwaqo, kuhlanganise wezimpahla, nganoma isiphi isikhathi sosuku noma ebusuku. Futhi ukuhlolwa akuyona ezimbi kakhulu njengokuphinga esigabeni ngamazwe. Nakuba kule minyaka emibili edlule, ngenxa yesimo kuqiniswa kwezomnotho nakwezombusazwe emhlabeni, beba isheke ngokuphelele, okwandisa nokuwela imingcele. Belarus kwaqinisa sina ukulawula kule ndawo.
Ukuze uthole ePoland zingenza ngokusebenzisa umgibeli p / n "Peschatka-Polovtsi" n / n "Berestovitsa-Bobrovniki" futhi n / n 'Bruzgi Forge-Bialystok ". Ngamunye wabo usebenza ubusuku nemini futhi ivumela zonke izinhlobo ngemgwaco nanoma uhlobo trailer. Abokuqala ababili zitholakala enyakatho Brest, kanti owokugcina uyoba ngo - e Grodno. Ngenxa yokuntuleka imizila eseduze omkhulu wezizwe emigqeni zikhona nhlobo, futhi p / p ukusebenza komkhawulokudonsa emangalisayo. Border kungaqedwa kumaminithi 15-20, ngokungafani kuya "Warsaw Ibhuloho", lapho ungalahlekelwa kufika emahoreni angu-10-12, ikakhulukazi ngezikhathi zamaholidi.
Road Schengen evulekile imingcele njengoba izintaba. Belarus uvumela izakhamuzi zayo abahlala ezindaweni umngcele ukuze bawele umngcele ngalesi isikimu lula kakhulu. Ngokungafani nezinye p / p, ukuze uthole eYurophu awukwazi kuphela ngemoto kodwa nihambe ngezinyawo. inezimpabano okunjalo umngcele amanga cishe ncamashi phakathi phakathi Peschatka futhi Berestovitsa: n / n 'wawephula-Belovezha ".
Imingcele "Lithuania-Belarus" futhi evulekile ngasiphi isikhathi sosuku ngawo wonke umuntu ukuba singene aseBaltic. Kunezinhlobo ezine kuphela, futhi ngamunye wabo isimo ngamazwe. I esimatasa wabo - p / n "Stone ungene Myadinenkay", elisesifundeni Grodno esifundeni. Lokhu akusona isimanga, ngoba kukhona iya umzila oxhumanisa Baltic amazwe nge Minsk nase-Ukraine. Kulabo abafisa ukwehlisa isikhathi sokuhamba, ngisho nalapho lokhu kulimaza amakhilomitha extra inikelwa ithuba uzame ukwenza kube ngokusebenzisa p / n "Benyakoni-Šalčininkai" futhi p / n "Kotlovka-Lavorishkes". Nakuba umuntu ewela umngcele engena "Lithuania-Belarus" bekulokhu inqubo abadumile kakhulu kancane futhi isikhathi eside, ikakhulukazi kusukela aseBaltic, bayathanda ukudlula izimoto aphume ukusakaza main. Isimo siyefana ngesikhathi p / n "Privalka-Raigardas". Nakuba mashinopotok lapha incane, ndima yayo kungenzeka ukulahlekelwa amahora ambalwa.
Indlela eLatvia ligijima le Vitebsk esifundeni. Lokho kukhona lula ngamazwe imingcele. Belarus angashiya ngokusebenzisa p / n "Urbany-Silene", noma p / n "Grigorovshchina-Paternieki". Nge-Russia, e-Republic iSivumelwano kuyi-friendly amasiko inyunyana, ngakho komngcele WaseRussia kungaba kalula ukuwela iyiphi inombolo ye izikhathi noma isiqondiso umhlali ngamunye kusukela Insimu Union uqobo. izakhamuzi zakwamanye amazwe ukungena Russian Federation manje visa liyadingeka. Lo mthetho ubizwa ngokucophelela kulawulwa Russian umngcele onogada. Imingcele "Belarus-Russia" zingatholakala ku amathrekhi P46, R132, E95, P112, P21, M1 (E30), i-M73, P43, P75 nabanye.
Kodwa ngaphezu kwakho konke angabanjwa e Belarus has nomakhelwane wayo oseningizimu. Imingcele "Belarus-Ukraine" ngelulela cishe njalo umzila ngokuxhumanisa kwala mazwe womabili. Ukraine ungathola bedabula imizana Veselovka, Nowa Huta, Komarin, Aleksandrovka Novaya Rudnya, Glushkevichi, Upper Terebezhov, Nevel, Dolsk, Mokrany, Oltush futhi Tomashovka. Bonke asebenze ubusuku nemini futhi sekudlule zonke izinhlobo zezimoto.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi manje konke yokuwela umngcele "Belarus-Ukraine" umsebenzi nge emikhulu isikhawu ndima ngenxa ukuhlolwa ngokuphelele wezimpahla izimpahla njengoba ohlangothini Belarusian futhi Ukraine.
Design Colorful enkulisa
I SOFAS kukhona "inkositini" obuhle umantilasi Bamathambo